Caalamka oo berrito u dabbaaldegaya xuska 24-ka Oktoobar ee dhaqangalinta Axdiga Q.Midoobay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By kullane / October 23, 2020 October 23, 2020
Maamulka iyo Madaxda Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maalinimada berrito oo ku began 24-ka Oktoobar ay u dabbaaldegaan xuska markii la saxiixay,isla markaana la dhaqan galiyay dukumiintiga aasaasiga ah ee Axdiga Qaramada Midoobay.
Axdigaan waxaa lagu saxiixay Magaalada San Francisco 26kii Juun 1945 wuxuuna dhaqan galay 24 Oktoobar 1945,iyadoo dowladaha xubinta ka ahaa dagaalkii labaad ee dunida ay ka qeybgaleen heshiiska saxiixaas.
Markii la saxiixay qoraalka aasaasiga ah ee Axdiga Qaramada Midoobay ,waxaa soo ifbaxay xeerar iyo rajooyin aad u wanaagsan oo samatabixiyay dunidii xilligaasi oo aad u burbursaneyd.
Axdigu wuxuu dhigayey qodobo ay ka mid yihiin sidii loo badbaadin lahaa jiilalka mustaqbalka, wuxuu ku baaqayaa Ururka inuu ilaaliyo nabadda iyo amniga caalamiga ah; kor u qaadidda horumarka bulshada iyo heerarka nolosha, xoojinta sharciga caalamiga ah iyo hormariyo xuquuqda aadanaha.
Xuska sanadkaan ee 75-guurada ka soo wareegatay aasaaska Axdiga,ayaa ku soo beegmay xilli ay caalamka ka jiraan caqabado waa weyn,taas oo ay u sii dheer tahay dhibaato caafimaad oo aan horay loo arag sida cudurka faafa ee COVID-19,kaaas oo saameyn dhaqaale iyo mid bulsho keenay.
Xoghayaha Qaramada Midoobay ee Arimaha Dalka Soomaaliya Mr.Janed Swan ayaa sheegay in xuska sanadkaan uu sidoo kale ku soo beegmaya waqti muhiim ah oo Soomaaliya ay u diyaar garoobeyso doorashooyin, iyadoo dalalka daneeya ay si wada jir ah u wada shaqeynayaan ,isla markaana dib u eegis lagu sameynayo dastuurka iyo howlaha kale ee gacan ka geysan kara horumarinta mudnaanta qaranka, dib u habeynta dimuqraadiyadda iyo ilaalinta xorriyadda.